नागको अन्डा देख्ने बितिकै चोखो मनले लाइक र सेयर गर्नुहोस् तपाईंको भाग्य चम्किने छ !!! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारनागको अन्डा देख्ने बितिकै चोखो मनले लाइक र सेयर गर्नुहोस् तपाईंको भाग्य चम्किने छ !!!
December 8, 2020 admin समाचार 2850
१,यौ न जीवन र सर्प: केही अध्यनहरुमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईले सपनामा सर्प देख्नु र तपाईको यौ न जीवनको निकैं नजिकैको सम्बन्ध रहेको छ । यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको यौ न ऊर्जासँग हुन्छ । साथै सपनामा सर्प देख्नाले तपाई आफ्नो यौ न साथिका बारेमा धेरै कुराहरु जान्न सकनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२,सर्प र समृद्धि: पुरानो समयमा, सर्पलाई सद्धृदिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको थिँयो । यस विश्वासको अनुसार, यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा सर्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँडै सफलता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईले थालेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुनछ । यर्सथ तपाईंले सफलताको मार्गमा आउँने सबै बाधाहरु पार गर्नुभयो ।
३,सर्प र चेतावनी:सपनामा सर्पको बारेमा अर्को धारणा यो हो कि तपाईंको वरिपरि कसैले त्यस्ता व्यक्ति छ, जसलाई तपाईले अत्याधिक मात्रामा विश्वास गर्नुहुँदैन । दोस्रो तथ्य के हो भने तपाईं कुनै पनि सत्यलाई बेवास्ता गरेर गलत मार्गमा अगाडि बढ्दै हुदैँन, यसलाई पनि जान्नुहोस्।
४,सर्प र आध्यात्मिकता:पूर्वी देशहरूमा प्रचलित विश्वासका अनुसार, सपनामा सर्प आउँनु भनेको तपाईंको कुन्डलिनी जागृत हुनु हो । तपाईंको शरीरले नयाँ प्रकारको ऊर्जा पाउँदैछ, जसमा तपाईंले सफलताको मुकुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सपनामा सर्प हुनुको अर्थ आध्यात्मिक उपलब्धिहरु संग पनि जोडिएको छ।
५,सपनामा सर्पले डस्नु:यदि सपनामा तपाईलाई सर्पले ड स्यो वा तपाईलाई निल्ने कोशिस गर्दैछ भने,यसको अर्थ हुन्छ तपाईंले कुनै पनि संघर्ष वा जीवनमा चलिरहेको परिस्थितिहरूलाई यथास्थितमा छोड्नु पर्छ । भविष्यमा यो स्थिति एक बोझ हुन सक्छ किनभने,यसको साथ बलियो रूपमा संलग्न हुनु तपाईको लागि बोझ भन्दा अरु केही हुँदैन ।
नागपंचमीका दिन काठमाडौँको नागपोखरीमा रहेको नागको प्रतिमामा दुध चढाउँदै ।६, सर्प र मन पर्ने वा नपर्ने: वातावरणको अनुसार तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, सपनामा सर्प आउनुको अर्थ फरक हुन सक्छ। तर सर्पको बारेमा तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ रु चाहे तपाईं तिनीहरूसँग डराउनु हुन्छ वा हुँदैन, तपाईंको सपना पनि यस कुरामा निर्भर गर्दछ ।
November 30, 2020 admin समाचार 3047
January 15, 2021 admin समाचार 2282
November 18, 2020 admin समाचार 3448